China ikhwalithi ephezulu yangaphandle IP65 4x200w 800w COB Led blinder light Manufacture and Factory | Ngale
Ikhwalithi ephezulu yangaphandle IP65 4x200w 800w COB Led blinder light
Ikhwalithi ephezulu yangaphandle IP65 4x200w 800w COB Led blinder light ingu-800W amandla & ukukhanya okuphezulu okukhanyayo kwangaphandle kwe-Led blinder, ikhwalithi ezinzile ecishe ibe ngu-0 ekhononda ngemuva kokuthengiswa emakethe ngaphezu kweminyaka engu-4. Iso ngalinye liholelwe ku-200W COB elinikeza umbala omhlophe owodwa noma i-CW / WW 2in1 ngokuzithandela. Iso ngalinye lingazungeziswa ngokuzimela ngesandla ku-26 °.
Ukusekelwa kwe-angle engu-55 ° ububanzi ngokukhanya okuphezulu kungageza indawo enkulu., Khetha ukushisa kombala ngeziteshi kuyatholakala. Ijika elihle lokufiphalisa nomsindo ongenalutho nophansi. Idatha ye-LUX @ 3M ngokugcwele ku-6200
Lokhu ukukhanya okukhanyayo okuphezulu nokusezingeni eliphezulu okungangeni manzi, kusetshenziswe ku-2018 Korea Games yama-Olimpiki asebusika ku -25 degree centigrade lokushisa kwemvelo. Kungumkhiqizo wokukhanyisa ongasesiteji selokhu waqala ukuthengisa emakethe ngo-2017
Umthombo oholelekile 4pcs 200W COB White 6000k nemhlophe efudumele emhlophe 3200k 2in1 eholwa Khombisa Thinta isibonisi
I-Beam angle 60 ° Isokhethi yedatha ngaphakathi / ngaphandle 3-pin XLR amasokhethi
Ukusetshenziswa kwamandla 800W Isokhethi yamandla Ukungena / ukuphuma kwe-Powercon engenamanzi
Ukulawula Isilinganiso Sokuvikelwa IP65
Izindlela Zokulawula I-Dmx512 / Auto run / Master slave / Umsindo uyasebenza Ukucaciswa
Imodi ye-DMX 2/9/16 Iziteshi Ubukhulu 420x420x155mm;
Izici NW 12.5 kgs
Ijubane lokulungisa i-fan ngokuya ngethempelesha eholelekile Iphakheji ejwayelekile: ibhokisi; Ikesi lendiza ngokuzithandela
Ubakaki uthweswe iziqu ngo-10 °
Ukugqama okuphezulu nokushisa kombala kuyashintsha Isitifiketi
I-strobe eguquguqukayo engu-0-100% eqondile I-CE, i-ROHS
Q: Uma inkinga engiyithengile inenkinga, yini okufanele ngiyenze?
Re: Yonke imikhiqizo esiyikhonzayo iwaranti yeminyaka engu-2, lapho izibani zinenkinga, okokuqala, sicela uxhumane nabathengisi futhi usinike imininingwane ngenkinga ngencazelo, izithombe noma amavidiyo. Sizokhulumisana ngokushesha futhi sikusize usule inkinga futhi sikuthumele izingxenye ezikhululekile. Uma imikhiqizo ingaphandle kwewaranti, sizokwenza ngendlela efanayo yokuxhumana, kukhokhiswa izingxenye zokungasebenzi.
Q: Ingabe amalambu akho avivinywa kahle ngaphambi kokuthunyelwa kimi?
Re: Yebo, i-100% ngokuqinisekile wonke amalambu adlulisiwe e-QC futhi ahlolwe kahle yi-ICQ, ngaphezu kokuhlolwa kokuguga kwamahora angama-48, ukuhlolwa kwe-hang, ukuhlolwa kokudlidliza nokuhlolwa okuphezulu kokushisa.
Langaphambilini Umkhiqizo omusha we-2021 2000W Led strobe ohambisa ukukhanya kwesigaba sobuchwepheshe bokukhanya
Olandelayo: Ukuthengisa okushisayo Mini ugongolo lokuhambisa ikhanda uchungechunge olunamandla we-250W 311W namandla we-380W